D2 / D3 —— Ny ankamaroan'ny orinasa mpamokatra fakantsary drotor multi-rotor ary mpamokatra | Rainpoo
Article Miresaka amin'ny Sales
Fakan-tsary mihetsika RIY
Sary avo lenta ， mahery sy azo antoka ho an'ny maodely 3D
D2M / DG3M Rafitra fanaovana modely 3D fakan-tsary mihetsika dimy-lens
D2Pros —— Fakan-tsary mandaitra drone multi-rotor tsara indrindra
D2 / D3 —— Ny fakan-tsary fakan-tsarimihetsika drone multi-rotor mahazatra
DG3 —— Fakan-tsary faran'izay drone APX-C malaza indrindra
DG3Pros —— Fakan-tsary miavaka tsara drone APS-C
DG4Pros —— Fakan-tsary mandaitra feno drôna feno
Fakan-tsary mihetsika RIS
maivana sy kely, marina tsara ho an'ny fakana sary an'habakabaka manjelanjelatra
Fakan-tsarimihetsika tokana RIE
Fakan-tsarimihetsika fakana sarimihetsika tokana sy avo lenta
Fitaovana kely, raharaha lehibe
Module fitahirizana data data HS
M600pro tendrombohitra azo antoka
Rindrambaiko fanivanana sary-sivana Sky-filter
Rindrambaiko mialoha ny fanodinana data Data scanner
Sky-target AT lozisialy Assignment
Fakan-tsary mihetsika RIY Fakan-tsary mihetsika RIS Fakan-tsarimihetsika tokana RIE
Ilay mpanamboatra fakantsary miavaka indrindra ao Shina Niorina tamin'ny 2015, rainpoo dia nifantoka tamin'ny oblique
Aleo noho ny maivana
Ny voalohany nandefa fakan-tsary mivalona dimy-lens ao anatin'ny 1000g (D2), avy eo DG3 (650g), avy eo DG3mini (400g).
Fakantsary iray, lasopy dimy. Ity fampidirana ity dia ahafahanao manangona sary avy amin'ny fomba fijery dimy amin'ny sidina iray.
Mianara miasa mandritra ny 10 minitra
Ny famolavolana maodely dia manamora ny fahalalan'ny olon-drehetra ny fomba fametrahana sy fampiasana fakan-tsary.
Kalitaon'ny sary avo sy marina
Solomaso optika novolavolaina tsy miankina. Gauβ indroa namboarina sy solomaso Asherika famafazana ambany kokoa
Ny fahasamihafana eo amin'ny vanim-potoana misy ny lantina dimy dia latsaky ny 10n.
Matanjaka sy azo antoka
Ny akorandriaka vita amin'ny firaka magnesium-aluminium dia ampiasaina hiarovana ireo lantina manan-danja, ary satria
Azo ampifandraisina amin'ny karazana drôna maro
Na UAV multi-rotor, drone elatra raikitra, na VTOL, ny fakantsarintsika dia afaka ampidirina miaraka amin'izy ireo sy f ...
Fandrefesana tany an-tany ， Cartografia ， Topographic ， Fandrefesana ny cadastral ， DEM / DOM / DSM / DLG
GIS, drafitra an-tanàna, fitantanana tanàna an-tany nomerika, fisoratana anarana amin'ny trano sy tany
fikajiana ny asa eto an-tany, fandrefesana ny haavon'ny haavony;
Fizahan-tany / Fiarovana ny tranobe taloha
Toerana mahafinaritra 3D, tanàna mampiavaka azy, sary an-tsary momba ny 3D
Miaramila / Polisy
fanarenana aorian'ny horohoron-tany, mpitsikilo sy fanarenana ny faritra misy ny fipoahana, faritra misy ny loza ...
- NAHOANA RAINPOO
- Momba ANAY
- Miresaka amin'ny Sales
Fanohanana any ivelany:+8619808149372
Misafidiana fakantsary mety sy matihanina ho an'ny drôna anao
Fakan-tsary miavaka voalohany eto an-tany ao anatin'ny 1000g
Ny RIY-D2 / D3 dia ampiharina indrindra amin'ny sehatra misy fepetra avo lenta toy ny 1: faritany 500 / cadastral. Ny D2 dia natao indrindra ho an'ny multi-rotor UAV, izay manangona angon-drakitra avo lenta avo lenta mba hahatratrarana ny fepetra takian'ny tetikasa.
Amin'ny fampiasana ny solomaso novolavolain'i Rainpoo tsy miankina, ny sary tany am-boalohany nangonina dia mazava amin'ny kalitao, loko mamirapiratra, ambany ny fanodikodinan'ny sary, avo ny maranitra ary ambany ny fanaparitahana azy. Ny maodely novokarina dia manana sisiny sy zorony mazava, izay mora kokoa amin'ny sarintany DLG.
D3 dia ny kinova D2 miaraka amin'ny halavany lava lava kokoa, izay mety kokoa amin'ny fanangonana tahirin-kevitra amin'ny faritra manana relif topografika avo lenta na avo rihana.
Inona ny endrik'ireo fampahalalana vao? Ahoana no fomba hiasako miaraka aminy?
ny endrik'ireo sary manta dia .jpg.
Matetika aorian'ny sidina dia mila ampidinintsika avy amin'ny fakantsary aloha izy ireo, izay mila ilay rindrambaiko noforoninay "Sky-Scanner" .Ary io rindrambaiko io dia ahafahantsika misintona angona amin'ny alàlan'ny lakile iray ary mamorona rakitra fisakanana ContextCapture avy hatrany koa.
Mifandraisa aminay hahafantarana bebe kokoa momba ny sary manta>
Fomba fametrahana amin'ny sehatra samihafa na elatra voafetra UAV na fiaramanidina kely?
RIY-DG4 PROS dia azo apetaka amin'ny drôna maro rotor sy elatra voafaritra ho an'ny fahazoana angon-drakitra sary mivalona. Ary noho ny fitaovana fanaraha-maso, ny singa fandefasana data sy ny zanadrafitra hafa dia maodely, noho izany mora ny mametraka azy sy misolo toerana. Miasa izahay miaraka amina orinasa drone maro manerantany, na elatra raikitra na multi-rotor ary VTOL ary angidimby dia hita fa namboarina tsara daholo izy rehetra.
Fa maninona no ilaina indrindra ny fampifanarahana ny lantina dimy?
Fantatsika rehetra fa mandritra ny sidina fiaramanidina dia hisy marika fampiroboroboana ny lantina dimy an'ny fakantsary miavaka. Raha ny teôria dia tokony hampiharihary miaraka ireo hazandrano dimy, ary avy eo ny data POS dia hosoratana miaraka.
Saingy taorian'ny fanamarinana tena izy dia tonga tamin'ny fehin-kevitra iray izahay: arakaraka ny maha-sarotra ny fampahalalana momba ny firafitry ny seho, ny habetsaky ny angon-drakitra azon'ny solomaso hamahana, ny famoretana ary ny fitehirizany ary ny fotoana laniny hamitana ny fandraisam-peo.
Raha fohy kokoa ny elanelam-potoana misy eo amin'ireo tsatok'afo ary tsy ilaina ny fakantsary, dia hiafara amin'ny "sary tsy hita" izany.
BTW,ny Ny fampifanarahana dia tena zava-dehibe ihany koa amin'ny famantarana PPK.
Inona ny fahombiazan'ny DG4Pros? Ahoana no hametrahako ireo masontsivana mifandraika?
DJI M600Pro + DG4matihanina
Halavan'ny sidina （m）
Haingam-pandeha Flight m / s）
Faritra fiaramanidina tokana （km2）
Laharana fahazoan-dàlana tokana
Isan'ny sidina iray andro
Faritra asa manontolo Andro iray （km2）
※ Ny latabatra parameter dia refesina amin'ny taha mitanjozotra maharitra 80% sy ny taha 70% an'ny transversal （amporisihinay）
Drôna manidina + DG4matihanina
faritra iasana （km2）
Faritra asa manontolo
Indray andro （km2）
Mifandraisa aminay hahazoana ny lakile>
Tranga iray mahomby amin'ny fakana sary miavaka
——Mampiasà maodely 3D hanaovana fanadihadiana cadastral ho an'ireo faritra avo lenta
Taorian'ny fandrosoana nandritra ny taona maro, any Chine izao, ny sary mivalona dia nampiasaina be tamin'ny tetik'asa fanadihadiana momba ny cadastral ambanivohitra. Na izany aza, noho ny fameperana ny fepetra ara-teknika momba ny fitaovana, ny sary mivalona dia malemy ihany amin'ny fandrefesana cadastral amin'ny seho midadasika, indrindra satria ny fenitra halavany sy ny endrika sary an'ny masolavitra fakantsary miavaka dia tsy maharaka ny fenitra. Taorian'ny traikefa nandritra ny taona maro nandritra ny taona, hitanay fa tokony ho ao anatin'ny 5 sm ny fahitsiana ny sarintany, avy eo ny GSD dia tokony ho ao anatin'ny 2 sm, ary ny maodely 3D dia tokony ho tena tsara, ny sisin'ny tranobe dia tokony ho mahitsy sy mazava.
Amin'ny ankapobeny, ny halavan'ny fakantsary ampiasain'ny tetikasa fandrefesana cadastral any ambanivohitra dia 25mm amin'ny vertika sy 35mm oblique. Mba hahatratrarana ny fahamarinan'ny 1: 500, ny GSD dia tsy maintsy ao anatin'ny 2 cm. Ary hahazoana antoka fa, ny haavon'ny sidina amin'ny sidina dia eo anelanelan'ny 70m-100m. Raha ny haavon'ity sidina ity dia tsy misy fomba ahafahana mameno ny angon-drakitra momba ireo trano avo 100 metatra amboniny. Na manao sidina aza ianao, dia tsy afaka miantoka ny fifindonan'ireo tampontrano ireo, vokatr'izany dia ratsy ny kalitaon'ny modely. .Ary satria ambany loatra ny haavon'ny tolona dia mampidi-doza izaitsizy ny UAV.
Mba hamahana ity olana ity, tamin'ny Mey 2019, dia nanatanteraka ny fitsapana fanamarinana marina momba ny Oblique Photography ho an'ireo trano avo be an-tanàn-dehibe izahay. Ny tanjon'ity fitsapana ity dia ny manamarina raha toa ka mahatratra ny fepetra takiana amin'ny 5cm RMSE ny fametahana farany ny maodely 3D namboarin'ilay fakan-tsary RIY-DG4pros oblique.
2. Dingana fizahana
Amin'ity fitsapana ity dia misafidy ny DJI M600PRO izahay, miaraka amina fakan-tsary mivelatra mivelatra Rainpoo RIY-DG4pros.
Fandrefesana faritra sy faritra fanaraha-maso teboka
Ho valin'ny olana etsy ambony, sy hampitomboana ny fahasahiranana, dia nifidy manokana sela roa izahay izay manana haavon'ny trano 100 metatra ho fitiliana.
Ireo teboka fanaraha-maso dia efa voalahatra araka ny sarintany GOOGLE, ary ny tontolo manodidina dia tokony ho misokatra sy tsy voasakana araka izay azo atao. Ny elanelana misy eo amin'ireo teboka dia eo amin'ny 150-200M.
Ny teboka fanaraha-maso dia 80 * 80 toradroa, mizara mena sy mavo araka ny diagonal, mba hahazoana antoka fa azo faritana mazava ny ivon-teboka rehefa mahery loatra ny taratra na tsy ampy ny fanazavana, hanatsarana ny marina.
Fandrafetana ny zotra UAV
Mba hiantohana ny fiarovana ny fandidiana dia nitahiry haavo 60 metatra izahay, ary 160 metatra ny sidina UAV. Mba hiantohana ny fifamoivoizana amin'ny tampon-trano dia nampitomboinay koa ny tahan'ny mifanindry. Ny tahan'ny fifampitohizana lavareny dia 85% ary ny tahan'ny fifandimbiasana transversal dia 80%, ary ny UAV dia nanidina tamin'ny hafainganam-pandeha 9.8m / s.
Tatitra momba ny Triangulation Aerial (AT)
Mampiasà rindrambaiko "Sky-Scanner" (Developed by Rainpoo) mba hisintomana sy hanomanana mialoha ny sary tany am-boalohany, avy eo ampidiro ao anaty lozisialy modely ContextCapture 3D amin'ny lakile iray.
Amin'ny ora: 15ora.
Avy amin'ny kisary fanodikodinam-panodinana, dia azo jerena fa ny fanodikodinam-mason'ny RIY-DG4pros dia tena kely dia kely, ary ny boribory dia saika mifanindry tanteraka amin'ny kianja mahazatra;
Hadisoana amin'ny fandavana RMS
Noho ny haitao optika an'ny Rainpoo, azontsika atao ny mifehy ny sandan'ny RMS ao anatin'ny 0,55, izay masontsivana manan-danja amin'ny fahamarinan'ny maodely 3D.
Fampifanarahana ny solomaso dimy
Azo jerena fa ny elanelana misy eo anelanelan'ny teboka main sy ny mason-tsivana mitongilana dia: 1.63cm, 4.02cm, 4.68cm, 7.99cm, mihena ny tena maha samy hafa azy, ny sanda hadisoana dia: - 4.37cm, -1.98cm, -1.32cm, 1.99cm, ny fahasamihafana ambony indrindra amin'ny toerana dia 4.37cm, azo fehezina ao anatin'ny 5ms ny fampifanarahana fakan-tsary;
Hadisoana amin'ny pinpoint
Ny RMS amin'ny teboka fanaraha-maso voalaza mialoha sy tena izy dia manomboka amin'ny 0,12 ka hatramin'ny 0,47 teboka.
3. Modely 3D
Seho amin'ny antsipiriany
Azontsika jerena izany satria mampiasa lantiro lava lava mifantoka ny RIY-DG4pros, ny trano eo ambanin'ny maodely 3d dia mazava be ny mahita azy. Ny elanelam-potoana farafahakeliny farafaharatsin'ny fakan-tsary dia mety hahatratra 0.6s, ka na dia nitombo ho 85% aza ny taham-pandrefesana lava dia tsy misy ny fivoahan'ny sary. Ny dian-tongotr'ireo trano avo be dia mazava sy mahitsy amin'ny ankapobeny, izay manome antoka ihany koa fa afaka mahazo dian-tongotra marina kokoa amin'ilay maodely isika avy eo.
4. Fanamarinana marina
Ampiasainay ny gara feno mba hanangonana ny angon-drakitra an'ireo teboka fanamarinana ary avy eo manafatra ny rakitra DAT ao anaty CAD. Avy eo, ampitahao mivantana ny angona angon-drakitra momba ny maodely mba hahitana ny tsy fitovizany.
Amin'ity fitsapana ity, ny manahirana dia ny fidinan'ny toerana avo sy ambany amin'ny sehatra, ny hakitroky ny trano sy ny gorodona sarotra. Ireo antony ireo dia hitarika amin'ny fitomboan'ny fahasarotan'ny sidina, ny risika avo lenta ary ny maodely 3D ratsy kokoa, izay hitarika ny fihenan'ny fahamarinana ao amin'ny cadastral survey.
Satria ny halaviran'ny RIY-DG4pros dia lava kokoa noho ny fakantsary mahazatra miiba, manome toky fa afaka manidina amin'ny haavon-toerana azo antoka ny UAV antsika, ary ao anatin'ny 2 sm ny famahana ny sary an'ireo zavatra tany. Mandritra izany fotoana izany, ny solomaso feno dia afaka manampy antsika hisambotra zoro trano maro kokoa rehefa manidina amin'ny faritra fananganana avo be, ka manatsara ny kalitaon'ny maodely 3D. Amin'ny alàlan'ny fiheverana fa azo antoka ny fitaovan'ny fitaovana rehetra, dia manatsara ny fifandimbiasan'ny sidina sy ny habetsaky ny teboka fanaraha-maso izahay mba hahazoana antoka fa marina ny maodely 3D.
ny sary mivalana ho an'ny faritra avo lenta amin'ny fanadihadiana cadastral, indray mandeha noho ny fetran'ny fitaovana sy ny tsy fahampian'ny traikefa, dia azo refesina amin'ny alàlan'ny fomba nentim-paharazana. Saingy ny fitaoman'ireo tranobe avo lenta amin'ny famantarana RTK dia miteraka fahasarotana sy tsy fahampian'ny fandrefesana ihany koa. Raha afaka mampiasa UAV isika hanangonana angon-drakitra, dia azo esorina tanteraka ny fitaoman'ireo fambara satelita, ary azo hatsaraina tsara ny refy fandrefesana. Ka ny fahombiazan'ity fitsapana ity dia manan-danja lehibe ho antsika.
Ity fitsapana ity dia manaporofo fa ny RIY-DG4pros dia tena afaka mifehy ny RMS amin'ny sanda kely, manana ny fahamendrehana maodely 3D tsara, ary azo ampiasaina amin'ny tetik'asa fandrefesana marina amin'ny tranobe avo.
Haben'ny fakantsary 190 * 170 * 80mm
Lanja fakan-tsary 850g
Isa CMOS 5pcs
Haben'ny sensor 23.5 * 15.6mm
Isan'ny teboka (Total) ≥120mp
Elanelam-potoana farafahakeliny ≤1s
Fomba fampisehoana fakan-tsary Fampisehoana Isochronic / Isometrika
Maody famatsiana herinaratra fakan-tsary Famatsiana herinaratra mitambatra
Fanomanana mialoha ny angona SKYSCANNER (GPS)
Hafainganan'ny kopian'ny data ≥70m / s
Mari-pana miasa -10 ℃ ~ 40 ℃
Fakan-tsary mihetsika RIYFakan-tsary mihetsika RISFakan-tsarimihetsika tokana RIEAccessories
Survey / GISSmart CityConstruction / MiningFizahan-tany / Fiarovana ny tranobe talohaMiaramila / Polisy
Vaovao momba ny orinasaVaovao momba ny indostria
Tantaran'i RainpooGlory GalleryMpiara-miasa / Distributors
Rihana faha-14, No.377 Ningbo Road, Tianfu New Area, Chengdu, Sichuan, Sina
Fanohanana any ivelany: +8619808149372